नेपाल महिला संघको तेश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको चहलपहल « News24 : Premium News Channel
नेपाल महिला संघको तेश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको चहलपहल
चार सालको जन्म , जन्मिएको तीन बर्षमा नै मुलुकको ऐतिहासिक परिवर्तनको साक्षी बनेको नेपाल महिला संघ क्रान्तिको कर्मठ आवाज पनि हो । सात सालको क्रान्तिमा यस्ले खेलेको भूमिकाले महिला संघलाई नेपाली महिलाहरुको संवाहक शक्ति पनि मानियो । यही महिला संघ अहिले आएर तेश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व छनोटमा जुटेको छ । बदलिदो मुलुकको धेरै परिवेशबीच महिला संघले पनि त्यही अनुरुपको भुमिका र न्यायको खोजीमा छ ।
शान्ति, संवृद्धि, महिला सहभागिता र संवैधानिक विकासको पक्षमा खरो उत्रने नेतृत्व चयनका लागि महिला संघका सदस्यहरुवीच रस्साकस्सी चल्दैछ । संविधानतः महिला सहभागीताको प्रावधानलाई स्थानीय तहवाट कार्यन्वयन गराउन महाधिवेशनको मूल एजेण्डा रहेको प्रतिनिधिहरुको भनाई छ । मतदान र निर्वाचनका लागि तयार उम्मेदवार र प्रतिनिधिहरु निर्वाचित नेतृत्वले एजेण्डा कार्यन्वयन गरिनेमा ढुक्क छन् ।
भृकुटीमण्डपस्थित महिला संघका नेता कार्यकर्ताहरुको भीड हो यो । वुधवार उद्घाटन भएको महिला संघको तेश्रो महाधिवेशनअन्तर्गत वन्द सत्र चल्दैछ । देशैभरीका महिलाहरु नयाँ नेतृत्व चयनका लागि उद्यत छन् ।
वि. स. २००४ साउन २४ गते स्थापना भएको महिला संघको यो तेश्रो महाधिवेशन हो । यस अघि २०५८ सालमा पहिलोपटक विराटनगर र दोश्रो महाधिवेशन २०६४ साल काठमाडौँमा भएको थियो । विविध विवादकावीच र संघमा अस्तित्वमा आएको परिवारवादका कारण महाधिवेशन हुन सकेको थिएन । तेश्रो महाधिवेशन आयोजना भइरहँदा नेतृत्व दुई खेमामा विभाजित भएको छ । तर तय नारालाई कार्यन्वयन गर्नका लागि सक्षम नेतृत्व आउनेमा प्रतिनीधिहरु विस्वस्त छन् । करिब दुई हजार २ सय प्रतिनिधिहरु मतदानका लागि तयार छन् । संघका नीति र योजनालाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउनका लागि पहल आवश्यक रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
यसपटकको महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट उमा अधिकारी र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट मीना पाण्डे संघको नेतृत्वको दौडमा छन् । महाधिवेशनले उठाएको महिला मुद्दाका विषय महाधिवेशनमा नै थला पर्न नदिन दुबै उम्मेद्वार सक्रिय छन् ।